रंगशाला निर्माणको काम सुरुभएकै दिन १६ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्राप्त | PBM News.com
रंगशाला निर्माणको काम सुरुभएकै दिन १६ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्राप्त
भरतपुर ७ साउन । चितवनमा निर्माण भइरहेको क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि आर्थिक संकलन हुने क्रम जारी छ । रंगशाला निर्माणकार्य पुन सुरु भएकै दिन चितवनको भरतपुरमा १६ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ । रंगशाला निर्माणमा जुटेको धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनलाई एक कार्यक्रममा बीच उद्योग बाणिज्य संघका केन्द्रीय सदस्य डा. तिलचन्द्र भट्टराई सहित पञ्चरत्न ग्रुपले १० लाख रुपैयाँ सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ ।
भरतपुरमा एक कार्यक्रमका बीच फाउण्डेशनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेललाई सहयोग रकम प्रदान गरिएको थियो । यसैबीच फाउण्डेशनलाई पुर्वेली समाज चितवनले पनि आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ । समाजले ५ लाख रुपैयाँ सहयोग हस्तान्तरण गरेको हो । यस्तै भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं. १२ का वडा अध्यक्ष नरेन्द्र कन्दङवाले पनि फाउण्डेशनलाई एकलाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको छ ।
पूर्वली सेवा समाजले आयोजना गरेको आर्थिक हस्तान्तरण कार्यक्रममा नै अध्यक्ष कन्दङवाले पनि सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेको हो । सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रदेश सांसद विजय सुवेदी, भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेनु दाहाल, जिल्ला समन्वय समिति चितवनका अध्यक्ष कृष्ण डल्लाकोटी लगायत सहभागी थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि
सत्तारुढ पार्टी भित्रको आन्तरिक किचलो कहिले सकिएला ?
वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढाउने प्रयास बाध्यकारी होइन, स्वेच्छिक मर्जर
राष्ट्रपतिलाई भेटेर बालवाटार फर्किए प्रचण्ड
पहिरोमा पुरिएर दार्चुलामा आमा–छोरीको मृत्यु